Ọdụ ụgbọ elu Billund na-agbasa njikọ njikọ ya na ọdụ ụgbọ elu 11
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ọdụ ụgbọ elu Billund na-agbasa njikọ njikọ ya na ọdụ ụgbọ elu 11
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Denmark na -agbasa akụkọ • News • Akụkọ na -agbasa ozi Poland • Technology • Tourism • Transportation
Bido na 2 Julaị, ọdụ ụgbọ elu Billund, ọdụ ụgbọ elu nke abụọ kachasị na Denmark, ga-agbasa njikọ njikọ ya na ọdụ ụgbọ elu 11, mgbe LỌ Polish ụgbọ elu malitere ọrụ site na Warsaw Chopin base. Na-arụ ọrụ ugboro 12 kwa izu, Star Alliance ụgbọelu ga-arụ ọrụ ụzọ ahụ na ngwakọta nke ụgbọ mmiri E170 na E175.
Kjeld Zacho Jorgensen, onye isi oche, Billund Airport kwuru, "Anyị nwere obi ụtọ ịnabata LOT na Billund ma nwee obi ụtọ na ọ hụla ikike dị na West West ahịa." Oge ụgbọ elu ahụ nyere njikọta nke ọma na ebe ọ na-aga na Poland, Central na Eastern Europe, yana ebe ọ bụla ọ ga-aga Asia na North America. LOT sonyere airtic, Air France, British Airways, Brussels Airlines, Finnair, Icelandair, KLM, Lufthansa, SAS na Turkish Airlines na-enye ohere ịbanye isi ọdụ ụgbọ njem Europe maka ndị njem Billund.
Uzo esi esi na West Denmark rue Warsaw agbago site na 22% n’afọ gara aga. Zacho Jorgensen na-agbakwụnye, sị, "Ihe karịrị ndị Poland 22,000 bi na nsị anyị, na 40,000 West Danes gara Poland n'afọ gara aga." "Anyị makwaara na ndị nwere ike na LOT na-aga n'ihu netwọk site na ya ehiwe ka aga dị ka Beijing, Singapore na New York bụ gburugburu 435,000 njem kwa afọ."
Ọrụ ọhụrụ nke LOT na isi obodo Polish sonyeere ọdụ ụgbọ elu Danish dị ugboro abụọ kwa izu na Chopin, nke Wizz Air na-efe. Ultragbọelu a na-akwụ ụgwọ dị ala na-arụkwa otu n'ime ọrụ ndị ọzọ nke Billund na Poland, ọrụ ugboro atọ kwa izu na Gdansk, ebe Ryanair na-enye ụgbọ elu ugboro abụọ kwa izu na Poznan. Tupu ọkwa ọkwa LOT, a na-atụ anya na ahịa Polish ga-abụ ahịa nke iri na abụọ nke Billund, na-enye nso oche 12 n'oge S37,000. N'ihi mmụba a, a na-atụ anya na ahịa mba ga-ebili oche 18 n'oge okpomọkụ a.